Sisiphi isisombululo sesiphene sokuhlamba impahla
Sisiphi isisombululo sokungaphumeleli kwezixhobo zokuhlamba impahla? Abahlobo abancinci abaninzi banalo xa umphathi wephupha, kwaye uvule iindawo zokuhlamba iimpahla ezilungileyo, le nto yinto entle, ufanelekile ukudumisa. Nangona kunjalo, abaninzi abantu bacinga ukuba kulula, uhlamba ngumxholo wezobugcisa uphantsi, umyinge awukho phezulu, nabani na onokukwenza.
Kodwa akunjalo, abahlambululi ukuba bajoyine kuyo, yile shishini elomeleleyo lobugcisa kwinkqubo yokuvula ivenkile, uya kuhlangana neengxaki ezininzi zobugcisa. Ewe, njengomrhwebi, ukholelwa ukuba awuyi kukhwankqiswa yile ngxaki, ngokungakhathaliseki ukuba ubaluleke kakhulu, ngokunyamekileyo, umgudu, ezi ngxaki zezobugcisa azikho iingxaki.
Ngokulandelayo, NGEZENYANZI ukuhlamba iingcali ngokuhambelana nomthengisi ngengxelo ezithile zeengxaki zobuchwepheshe eziqhelekileyo, zichazele zona enye.
Okokuqala, iphutha eliqhelekileyo lomatshini wokuhlamba. Ngokuqhelekileyo, akukho mishini yokuhlamba yomatshini wokuwahluleka komatshini, kodwa kufuneka ukwazi, ufuna ukuvula indawo yokuhlamba impahla, iminyaka embalwa okanye ngaphezulu, le nkqubo inzima ukuphepha ezinye iingxaki ezincinci. Ngeli xesha, kufuneka uqhagamshelane nabaxhasi bakho, maye banike inkxaso ngenkxaso. Ukujoyina kwakho ngokubanzi, iklasi yokuqala yokunxibelelana ngeendlela zokunxibelelana ezikude ukukunceda uqonde imeko eqhelekileyo, kubandakanywa nexesha lephutha, iphoso lemeko ethile, indawo ekufutshane kuyo izitolo ze-napa njalonjalo.
Sisiphi isisombululo sokungaphumeleli kwezixhobo zokuhlamba impahla? Okwesibini, i-generator ye-steam iphinda ihluleke rhoqo kwezixhobo. Ezi zilandelayo zintluleliso ezintathu ezifunekayo ukuba wazi:
Umtywala kwi-generator ye-steam, kodwa ucofa umlotha, umenzi-generator womoya okhoyo apho uninzi lwamanzi okanye imfudu yamanzi kunye ne-steam spitting out, kubonakala ukuba lolu hlobo lweemeko lunokubangela ukuba uphendule imoto yamanzi okanye i-valve ye-drain ayivaliwe Amanzi emva kokufudumeza, lolu hlobo lweemeko luyakongeza ii-hotkeys azivulekanga, okanye ungeze imigca echasalayo ibonakala ingxaki, njl.; Ngaphandle kwesikhephe, ngeli xesha kufuneka uhlolisise i-cover back or valve output output generator, khangela ingaba zivulekile.
Inqaku lokugqibela: Indlela yokugweba umgangatho w...
Inqaku elilandelayo: Indlela yokuvula iindawo zokuh...